Kana Iwe Usingazive Zvekuita Nehupenyu Hwako, Verenga Izvi. - Blog
Kana Iwe Usingazive Zvekuita Nehupenyu Hwako, Verenga Izvi.
Iwe unonzwa kunge urikufamba pamusoro pegungwa re dreary, risinganakidze, monotony uye haugone kuona mahombekombe echitsuwa chinonyaradza, chinogutsa uko raison d'être yako (aka chikonzero chako chekuve) yakamirira iwe.
Usanetseka, hausi wega. Muchokwadi, iwe uri chikamu cheboka rakakura revanhu pasi rino. Iwe hauzive zvekuita nehupenyu hwako uye hauzive maitiro ekuziva futi.
Chinhu chekutanga kunzwisisa ndechekuti izvi zvakajairika vanhu havana kuzvarwa vachiziva iro ravo rekupedzisira basa munharaunda richava. Pane kudaro, ivo vanozvarwa vaine mikana isingaperi kubva kwavanozowana kudaidzwa kwavo. Dambudziko nderekuti kunyangwe sarudzo iri hombe, kusarudza kuri kunetsa zvakanyanya.
Zvakare, hupenyu huri mukugara uchingobuda uye sarudzo chaiyo inoshanduka sezvo rwendo rwako ruchipera. Hazvishamise kuti vazhinji vedu tinozviwana tiine kunzwa kunetsekana zvekuti pangave nezvakawanda kunze uko kana tichigona chete kuzviwana.
Kana iwe wagumburwa ichi chinyorwa, mikana ndeyekuti iwe uri mumwe wevanhu ava. Uine izvi mupfungwa, heano mamwe anonongedzera iwe kuti utevere ayo anofanirwa kukutungamira munzira kwayo yekupedzisira kuti ufumure chinhu (s) chaunoda kuzadzisa muhupenyu.
Ramangwana Harisi Redu Kuti Uone
'Ramangwana haisi redu kuona' ndiwo mazwi kubva kune rwiyo rwakakurumbira rwaDoris Day uye ndezvechokwadi kusvika pamwero mukuru. Tinogona kungotanga kufungidzira izvo hupenyu hwakatichengetera uye isu zvatisingafanirwe kuwira mumusungo yekufunga isu tinofanirwa kuronga kweedu ese hupenyu hupenyu.
Iwe haugone kuziva zvingangodaro zviri pakona hutano hwako, mamiriro ako ebasa, mhuri yako, uye nzanga yakafara vese vanogona kuona shanduko yakati wandei uye zvinhu zvakawanda hazvigone kurongerwa.
zvinhu zvinonakidza zvekuitira mukomana wekuzvarwa zuva rekuzvarwa
Iwe unogona, zvakadaro, tarisira mberi munguva pfupi uye edza kuita zvinhu zvakawanda zvinokuunzira mufaro sezvaunogona. Kunyangwe izvi zvichisanganisira basa rako kana kungoita zvaunofarira, nekutandanisa nguva dzakanaka, tinogona kuita kuti rwendo rwunakidze.
Chibereko cheiyi nzira ndechekuti iwe ugone tsvaga matarenda akavanzwa kana shuwa zvakazara nekutsvaga mikana yekuwana mufaro wechokwadi.
Uye kune izvo zvinhu zvausingakwanise kufanoona, iwe unogona chete kuyedza kukanda nezvibhakera wozvitora sezvavanouya. Kusava nechokwadi hakugone kudzivirirwa uye zvimwe zviitiko zvinounza nyonganiso huru imwe nzira yekutsungirira kuyedza kuona yega yega isina kunaka sekumirira kwakanaka kuti zviitike - kana ukazviita.
Gamuchira Kusagadzikana Kuti Uwane Mufaro
Nzira yehupenyu haiwanzo kutsetseka, zvinoreva kuti iwe unozosangana nematanho ekusagadzikana kukuru. Kunyangwe iko kuri kushomeka kwemari kunokutadzisa kuita chimwe chinhu kana kudengenyeka kwepasirese kunopidigura nyika yako, unofanira kungobvuma kuti kugogodza nemabhomba hazvigone kunzvengwa zvachose.
Nguva imwe neimwe yaunonzwa kusagadzikana kwakadai, iwe unodzidza zvishoma nezvako uye nezvako zvido zvako zveramangwana. Iwe unozotsvaga zvauri uye usingade kutsungirira uye izvi zvinokutungamira iwe kune akakodzera nzira dzenzira parwendo rwako.
Semuenzaniso, ungangotanga kuda kuve gweta, asi uzviwanire iwe makore matatu mukudzidziswa kwako nemamwe makore mazhinji pamberi pako, anenge asina mari, uchishanda makumi manomwe emaawa masvondo uye usingatyi usina mufaro. Wakatora nguva yekusagadzikana kukuru, asi iwe wakadzidza kuti pane yako miganho maererano nekusunda pfungwa dzako nemuviri nekuda kwechinangwa chebasa. Iwe unogona ikozvino kugadzirisa kosi yako uye kutsvaga mikana yakasiyana inowirirana zvirinani nekushushikana kwepfungwa nemuviri.
Sunga Zvokuvhiringidza Uye Bvisa Kure Nekuverengera
Usambofa wakakanganwa kuti nguva haimiriri munhu. Ungangoda kutsvaga nekudzingirira hope, asi haukwanise kudaro kana ukaramba uchiisa zvisingadzivisike. Chengetedza zvaunofarira, nguva yemhuri yako uye zvimwe zvinhu zvaunokoshesa zvechokwadi, asi tora nguva yese yakaparadzwa woita chimwe chinhu nazvo.
Kufumura nzira yako muhupenyu hakusi kunze kwekushanda kwayo nesimba uye nesimba. Iwe unofanirwa kuisa pfungwa dzako kushanda, kubatanidza muviri wako uye kushandisa nguva yaunayo.
Tsvagurudzo ingangoita nzira dzebasa, taura nevanhu vane ruzivo mumunda, kunyange kuzvipira kana zvichikwanisika kuti uwane pfungwa yekuti zvakakunakira kana kwete. Iwe haugone kumbotaura zvechokwadi kuti uchafarira chinhu chakadii kusvikira waita maoko ako akasviba uchichiita kwechinguva. Uye iwe unogona chete kuzviita kana iwe ukarega kupa zvikonzero uye kurega kutsvaga nzira dzekutambisa nguva yako.
maitiro ekudzivisa godo muhukama
Nei Ndine Usimbe Uye Ndingaitei Kuti Ndirege Kurega Husimbe Hwokukunda?
Zvikonzero zvishanu Munhu wese Anofanirwa Kuita Vision Board
Bvunza Mibvunzo (Zvese Zvikuru & zvidiki)
Iwe haugone kuwana ruzivo usina kubvunza mimwe mibvunzo, asi kana iwe uchitsvaga chinangwa chekutyaira kutungamira mafambiro ako emangwana muhupenyu, unowanzo fanirwa kuzvibvunza iwe kwete vamwe.
Dzimwe nguva uchaona mibvunzo mikuru ichibatsira, senge zvauri anonyanya kufarira , paumire pane nyaya hombe dzetsika, waizoisa kupi pamberi kana mari nenguva zvaisava chinhu - icho chinhu chakadai.
Dzimwe nguva, inogona kunge iri mibvunzo midiki iyo inokubatsira iwe kunatsa nzira yako. Iwe unoda here kushanda munzvimbo yemahofisi? Unosarudza guta, dhorobha, kana nyika kugara? Ndeapi mabasa ehukama akakwana iwe? Nguva yekuzorora yakakosha kwauri here?
Paunonyanya kuongorora iyi nemimwe mibvunzo, unosvika padyo kunzwisisa zvauri uye iko kudaidzwa kwako kwakanaka kuri muhupenyu (kana, zvirinani, mune yako yazvino nhanho yehupenyu).
Iva Nekuda Kuita Zvibayiro Munguva Pfupi
Pari zvino ungadaro ndinonzwa ndakarasika iwe hauzive zvekuita nehupenyu hwako uye iwe unoda kusvika nzvimbo kwaunoita. Nekudaro, pakati penzvimbo yauri izvozvi nekwaunoshuvira kuve, pane nzira yakaoma yekufamba.
Kusagadzikana chinhu chakatotaurwa, asi chimwewo chinhu chaungatofanira kujairira chibayiro.
Iwe unoona, isu tinongova nenguva yakawandisa nesimba patinogona uye apo iwe parizvino unogona kuwana nzira dzekushandisa zvese zviri zviviri, kana iwe uchida kutora kusvetuka uku hupenyu hwekugutsikana zvakanyanya , uchave uchatofanira kusiya zvimwe zve zvinhu zvauri kutora sezvazviri .
Pamwe, mushure mekuita yako research uye nekuzvibvunza iwe mibvunzo chaiyo, unofunga kuti iwe unoda kutanga bhizinesi. Asi hausati wave nemari inodikanwa kuti ubvise pasi. Iwe ungatofanira kuisa mumaawa ekuwedzera pabasa rako razvino, wedzera mari nekushandisa kwako, uye kutoregedza humbozha hwazvino senge mota dzemoto uye mazororo ekunze kuitira kuti kurota kwako kuve kwechokwadi.
Iwe unofanirwa kuve unodisisa kuenda mberi izvozvi kuti ubudirire mune ramangwana, nekuti kana usiri, iwe uchanetseka kushandura mamiriro ako uye kufamba munzira yekufara.
Dzimwe nguva iwe unofanirwa kuona iyo mikana inouya ichigogodza pasuo rako uye iwe unofanirwa kuve unodisa kupindura yavo kufona. Rangarira, kuyedza chimwe chinhu kunze ndiyo imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekuziva kuti yakakunakira sei, saka kana hupenyu hukatsvaga kukuratidza nzira, usairegedze - bata nemaoko maviri uone kuti zvinokutora kupi.
Iwe unogona kunetseka kuti haisi nguva yakakodzera kana mukana wakakodzera, asi hauzombozive kunze kwekunge iwe ukakwakuka ukawana.
Kugara pamaoko ako uye kusaita chinhu isarudzo, asi iyo ndiyo imwe yaunogona kunyanya kuzvidemba paunenge uchikura. Vanhu havawanzozvidemba nezvezviitiko zvavo, asi vanowanzozvidemba kusaenda kune imwe pakutanga.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nehupenyu hwako? Taura nemudzidzisi wehupenyu nhasi anogona kukufamba nenzira yekuziva. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
hunhu hwaunoda mumurume
owen hart wwe imba yemukurumbira
maitiro ekuzvidavirira pane ako zviito
kutonhora kwebwe vs bret hart
kuita shungu nechimwe chinhu